Ny fihaonambe Barcelona dia manoritra ny ho avin'ny fizahan-tany maharitra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Espaniola » Ny fihaonambe Barcelona dia manoritra ny ho avin'ny fizahan-tany maharitra
Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Espaniola • News sustainability • Tourism • Travel Wire News
Ny fihaonambe Barcelona dia manoritra ny ho avin'ny fizahan-tany maharitra.
Ny Fihaonambe dia hifarana amin'ny 'Barcelona Call to Action', fanambarana finiavana nosoniavin'ny governemanta, ny toerana haleha ary ny orinasa manoritsoritra ny vina iraisana ho an'ny fizahan-tany maitso kokoa, tafiditra kokoa ary maharitra, amin'ny fitanisana ny mety ho fandraisan'ny sehatra anjara amin'ny tanjona amin'ny fampandrosoana maharitra sy ny Hiverina any amin'ny net-zero.
Ny Vovonana dia miantehitra amin'ny fandraisan'anjaran'ireo mpitarika eo amin'ny sehatry ny fandraharahana, ny politika ary ny sehatra iraisam-pirenena.
Ny Vovonana dia manazava mazava ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny fananganana fizahan-tany maharitra sy maharitra.
Ny Vovonana dia maneho ny fotoana voalohany nivondronan'ny sehatra hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina.
UNWTO dia nanatevin-daharana ny Advanced Leadership Foundation sy ny Incyde Foundation an'ny Chambers of Commerce of Spain ho an'ny andro fanokafana ny Ho avin'ny Fihaonambe maneran-tany momba ny fizahantany (26-27 Oktobra 2021). Ny Vovonana dia maneho ny fotoana voalohany nivondronan'ny sehatra hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina.
Manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fizahan-tany tsy mbola nisy toy izany, ny Vovonana dia miantehitra amin'ny fandraisan'anjaran'ireo mpitarika eo amin'ny sehatry ny fandraharahana, ny politika ary ny sehatra iraisam-pirenena, miaraka amin'ny Mpanjaka Felipe VI avy any Espaina izay Filoham-boninahitra. Nanatevin-daharana ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvili i Rebecca Grynspan, Sekretera jeneralin'ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny Varotra sy Fampandrosoana (UNCTAD), Mauricio Claver-Carone, Filohan'ny Banky Fampandrosoana Iraisam-pirenena (IADB), Juan Carlos Salazar, Sekretera- Jeneralin'ny International Civil Aviation Organization (ICAO), Reyes Maroto, Minisitry ny Indostria, Varotra ary Fizahantany ao Espaina, Juan Verde, Filohan'ny Advanced Leadership Foundation, ary José Luis Bonet, Filohan'ny Antenimieran'ny Varotra Espaina. Niaraka tamin’izy ireo dia nisy minisitry ny Fizahantany miisa 10 nanatrika mivantana, ary maro ireo Minisitra tonga saika.
Fiaraha-miasa, famatsiam-bola ary fanavaozana
Ity Vovonana ity dia manazava mazava ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa, ary koa ny anjara asa lehibe amin'ny famatsiam-bola ny fizahantany sy ny fampiasana ny herin'ny fanavaozana dia hotanterahin'ny fananganana fizahan-tany maharitra sy maharitra.
Zurab Pololikashvili, sekretera jeneralin'ny UNWTO Hoy izy: "Ity Fihaonambe ity dia manazava mazava ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa, ary koa ny anjara asa lehibe amin'ny famatsiam-bola ny fizahan-tany sy ny fampiasana ny herin'ny fanavaozana dia hatao amin'ny fananganana fizahan-tany maharitra sy maharitra."
nandray anjara Sekretera jeneraly Pololikashvili ho an'ny adihevitra avo lenta momba ny 'Famatsiam-bola ny hoavin'ny fizahantany', ny sekretera jeneralin'ny UNCTAD Rebecca Grynspan dia nanamafy fa “mila fanohanana ara-politika sy fampiasam-bola ny fizahantany.”. Ramatoa Grynspan dia nomena anarana UNWTO noho ny asany amin'ny fampiroboroboana ny accreditation sy ny fanamarinana hatramin'ny nanombohan'ny krizy ary nanampy hoe: "Ny fizahan-tany dia mety ho angovo sy hery tena tsara hananganana tsara kokoa, amin'ny fomba hafa ary miaraka."
Ao anatin'ny fandaharan'asa izay maneho ny laharam-pahamehana lehibe amin'ny UNWTO ary ny fizahantany maneran-tany amin'ny ankapobeny, ny famatsiam-bola ny ho avin'ny fizahantany no nifantohan'ny andro voalohany, indrindra ny fanafainganana ny firosoana mankany amin'ny fitomboan'ny net-zero. Miaraka amin'ireo mpitondra eran'izao tontolo izao ho tonga any Glasgow ho amin'ny fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny fiovan'ny toetr'andro (COP26) amin'ny herinandro ho avy, ny fifanakalozan-kevitra tao Barcelona dia nanambara mazava ny fahavononan'ny fizahan-tany handray ny fanavaozana sy hiantoka ny famatsiam-bola ilaina mba ahafahan'ny sehatra miaina mifanaraka amin'ny andraikiny momba ny toetrandro.
Barcelona 'Antso ho amin'ny hetsika'